Andro: 27 Oktobra 2019
Ny fiaran-dalamby "haingana indrindra eran-tany novokarin'i Chine ary afaka 350 km isan'ora dia nosedraina tamin'ny volan'ny mpandeha. Hikoropaka ny valin'ny fitsapana ny mpandeha hanoloana ilay vola madinika [More ...]
Izmir Soke fiaran-dalamby sy sarintany 2019
Izmir Soke fiaran-dalamby sy sarintany 2019. TCDD Transportation Co. dia sidina 1 valisoa eo anelanelan'i Izmir sy Söke. İzmir Söke is 127 km ary ora amin'ny dia [More ...]
Izmir Denizli lamina fiaran-dalamby sy sarintany [More ...]
Ny vidin'ny Channel Istanbul 75 Billion TL
Hotanterahina mandritra ny volana novambra 28 Review Evaluation Review Evaluation Review Evaluation Commission (Evaluation Review Evaluation Review (EK)). 75 miaraka amin'ny vidiny TL miliara [More ...]
Ny halavan'ny lalamby lalamby mampitohy an'i 39, Shina, dia nahatratra 1 000 kilometatra. Minisitry ny Fitaterana any Sina Sözcüsu Wu Chungeng dia misy eo amin'ny zotra fitaterana lalamby eo anelanelan'ny tanànan'ny 39 firenena. [More ...]
Minisitry ny Turhan: 'Raha mitombo ny isan'ny mpandeha any Burdur'
Nitsidika ny governemantan'i Burdur ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Mehmet Cahit Turhan. Taorian'ny fandaharan'asan'ny Isparta, ny minisitra Turhan, izay tonga tao Burdur avy ao amin'ny biraon'ny governora, Governor Hasan Şıldak ary ny protocol. [More ...]
Ny lalamby an-tsary Bayburt mandritra ny taona maro dia tena zava-dehibe ho an'ny faritra
Ny Trabzon Bayburtlular Association, izay tsy mahazo aina momba ny tsy fisian'ny Bayburt amin'ny lalana Erzincan-Gumushane-Trabzon Railway, izay noresahina imasom-bahoaka tato ho ato ary nanao volavolan-kevitra ho an'ny tetikasa, dia nanao fanambarana an-gazety. Indrindra any Trabzon [More ...]
Izmir Tire Train Times sy Map 2019: TCDD Taşımacılık A.Ş. Ny sidina 4 no tanterahina eo anelanelan'i İzmir Tyro. Nampitombo taorian'ny asa fanavaozana ny làlana teo anelanelan'i İzmir Ödemiş [More ...]
Ny tantara, ny dian'ny natiora sy ny kolontsaina dia natomboka tamin'ny fiara fitateram-bahoaka izay napetrak'i Elazığ Munisipaly mba ho fandraisana anjara amin'ny fampiroboroboana ny soatoavin'ny fizahan-tany ao an-tanàna. Elazığ Munisipaly, izay manao fitsangatsanganana tanàna iray miaraka amina bisy efa zatra manokana [More ...]
Fihenam-bidy Balkart ho an'ny mpianatra any Balıkesir
Balıkesir Metropolitan Munisipaly niray hevitra nanapa-kevitra ny hanao fihenam-bidy 17 ho an'ireo mpianatra amina andalana bus. Ny fandaharam-pianarana 2,00 TL 1,65 TL, KYK - ny fandaharam-pianarana mpianatra Kampus [More ...]
Nanomboka tao Mihalıççık ny asa vita amin'ny lalana
Nanomboka Tepebasi in İnönü, Khan sy Seyitgazi ao amin'ny mitohy mpanao lalana nandalo ohatra mivaingana fa maro kaominina sy ny fikambanana any Torkia, Eskişehir Metropolitan Monisipaly, demystifies ny simenitra lalana Mihaliccik distrika. Avy amin'ny olom-pirenena [More ...]
Fanaraha-maso tsy tapaka amin'ny fiara fitaterana ho an'ny fitaterana azo antoka amin'ny mpianatra any Mersin
Ny monisipaly Mersin Metropolitan dia mitohy hatrany ny fanaraha-maso ny serivisy ho an'ny fiara fitaterana azo antoka. Ny ekipan'ny polisy monisipaly Metropolitan dia manao fisafoana fiarovana amin'ny serivisy misy marim-pototra amin'ireo sekoly manerana ny tanàna. Ireo fanamarinana ireo dia natao tamin'ny fenitra avo lenta, [More ...]
6 ao Mersin. Nanomboka ny Fetiben'ny Bike Caretta
Ny ben'ny tanàna ao amin'ny Mersin Metropolitan Vahap Seçer, Fikambanan'ny Mpizara bisikileta Mersin sy ny kaominina Metropolitan amin'ity taona ity miaraka amin'ny 6. nandray anjara tamin'ny Fetiben'ny bisikilety Caretta. Secor, Torkia ny fandraisana anjara amin'ny tanàna samihafa 22 [More ...]
29 ao amin'ny fitaterana İzmir tamin'ny Oktobra 1 Kuruş ..! Notaterina ny fandaharana andron'ny Repoblika Izmir
Izmir Metropolitan Munisipaly dia nanambara ny fandaharana 29 Oktobra Republic Day. Amin'ity andro manokana ity izay voafetra ny saram-pitateram-bahoaka hoe "1 kuruş," ny 350 metatra Tiorka dia hoentina miaraka amin'ny filaharana amin'ny fanodinana jiro. Leman Sam [More ...]